Minisitra Andrianainarivelo Hajo: “Mandalo sivana ny fidirana amin’ny asam-panjaka” | NewsMada
Minisitra Andrianainarivelo Hajo: “Mandalo sivana ny fidirana amin’ny asam-panjaka”
Tsy mandeha ho azy fa misy fepetra. Anisan’ny nandray mpiasam-panjakana tsy raikitra (ECD) ho tena mpiasa maharitra (ELD) ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny fananan-tany (MaTSF). Natao omaly ny lanonana tsotra amin’izany.
Nambaran’ny minisitra Andrianainarivelo Hajo fa nanao ezaka manokana ny fanjakana amin’ny handraisana ireo ECD ho ELD mba hisitrahany ny zo maha mpiasam-panjakana azy ireo. Ilaina amin’ny asam-panjakana izany mba hananany ny zo, toy ny fisotroan-dronono rehefa tapitra ny asany. “Ilaina anefa ny fahaizana sy ny traikefa ary nandalo sivana nialoha ny nandraisana azy ireo. Ezaka manokana ataonay ny fampiakarana grady ho an’ireo niezaka niofana mba ho tena matihanina amin’ny fanatanterahana ny asam-panjakana”, hoy izy. Nohitsiny kosa anefa fa tsy maintsy manaraka famindran-toerana, tapaky ny fanjakana izy ireo. “Irahina hiasa ho an’ny fanjakana avokoa izy ireo”, hoy ihany ny minisitra.
Niaiky kosa anefa ny tenany fa tsy mbola ampy ireo mpiasan’ny minisitera. Na eo anivon’ny foibe na koa ny amin’ny faritra 23. Eo koa ireo sampandraharaha sasany tsy mbola ampy mpiasa. Natsidiny anefa fa mbola anaovana ezaka manokana izany, ankoatra ireo efa nampanaovina fifaninanana tamin’ny herintaona ary efa niditra niasa.
Anisan’ny miady amin’ny kolikoly koa ny MaTSF ka natao amin’ny alalan’ny fifaninanana avokoa ny fidirana hiasa eo anivon’ny minisitera. “Narahina an-tsakany sy an-davany ny fepetra, tsy hisian’ny kolikoly ka amin’ny alalan’ny fifaninanana avokoa izany raha misy toerana malalaka. Tsy hisy izany ny fampidirana mpiasa araka ny tian’ny lehibe izany”, hoy izy.